George RR Martin anotaura nezvekuguma kwake kune Game of Thrones | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Fantasy, Mabhuku
Nguva yechando yapera.
Game yezvigaro zvapera. Yayo terevhizheni vhezheni zvirinani. 8 mwaka izere nezvese, zvakanaka, zvakaipa uye zvakajairwa, asi zvakadaro uchidhonza mamirioni evateveri kutenderera pasirese. Uye iyo gakava zvakare nekuguma. Asi yake chinyorwa chinyorwa chisati chanyorwa uye musiki wayo, George RR Martin, akataura nezvazvo achiti zvichave zvakasiyana uye zvakareba.
1 Pedzisa Mutambo Wechigaro
2 George RR Martin anotora stock
4 Kuguma asiwo kutanga
6 Kuguma ikoko kunenge kwadii
Hameno Game yezvigaro
Akazviita Muvhuro wadarika apedza a isina kuenzana mwaka wechisere, maererano nevakawanda, inonakidza, zvinoenderana nevamwe, uye magumo enharo, maererano neanenge munhu wese. Ndinoreurura kuva mumwe weavo vashoma mienzaniso papuraneti iyo yakangoona mwaka wekutanga uye isingakwanise kukunda kutemwa kwaNed Stark. Saka handisi kurasikirwa nhasi kushuva kana kusafunga kwezviuru zvevateveri venhevedzano iyi. Hongu zvirokwazvo, ndine mune yangu kuva neimwe hukama hwakanaka uye hwakananga ne... Jon Snowque akatotiudza kuverenga kwake imwe nguva yapfuura.
George RR Martin anotora stock
Iye anozvitaurira mune rake blog. Zvekuti nguva yapfuura sei nekugomera kubvira paakatanga, anopfuura makore gumi apfuura, muchirongwa chemu terevhizheni akateedzana pasina mubvunzo kuchinja hupenyu hwake. Akanga atoita zvinhu zvechidzitiro chidiki. Asi pakanga pasina nzira yekuziva izvozvo kugadziriswa kwenyaya iyo yakatanga nayo Rwiyo rwechando nemoto Ini ndanga ndichifunga kuti zvange zviri chii: a pasirese uye nekubudirira zvachose nemamiriyoni evateveri vanonyanyisa uye kubudirira kukuru kweterevhizheni kune network HBO, iyo yaive yatowana mukurumbira wakawanda neanoshamisa Roma.
George RR Martin anoratidzira kwete chete kugutsikana kana iyo isingaverengeke mibairo. Zvakare chokwadi shandura vakakanda asi vasingazivikanwe (kunze kwekusiiwa kwemazita makuru pachiitiko cheBritish) mune nyeredzi dzemapuraneti. Kunyange anoshamisika kuva mumwe wavo zvakare uye anobvuma kuti nanhasi haana chokwadi nezvakaitika kana kuti sei.
Ehe George RR Martin ane vanhu vazhinji vekutenda, zvekuti zvekuti mumwe munhu anosara kumashure. Kubva kune vagadziri, ivo cast, timu kana network. Asi bvuma izvozvo pane zvakawanda zvekutenda nazvo. Iwe unosarudza kurangarira kana kunyora nezve dzaunofarira nguva kubva mukutora mafirimu akateedzana paunonzwa kusaziva, nekuti parizvino pane zvakawandisa uye hauna nguva yekuvaitira kururamisira kwakakodzera.
Kuguma asiwo kutanga
Ndozvazviri Martin anoda kufunga. Kuti munhu wese akateedzana (madhairekitori, cast, vashandi ...) vari kuzopararira. Pachave nemamwe mapurojekiti avo pane chiuru chitsva nzvimbo uye nyaya. Uye kana ari iye, acharamba aripo uye akabatikana.
Nekuti semugadziri ane zvimwe cinco zvakarongerwa HBO, dos nokuti Hulu uye imwe ine Nhoroondo Chiteshi. Vamwe vari zvichienderana nenyaya dzavo pachavo uye mabhuku uye vamwe kubva kune akasiyana magadziri. Uye zvechokwadi, zveshuwa, ari kunyora nekuti nguva yake yechando haisati yapera.
Kuguma ikoko kunenge kwadii
Ndizvo zvavanomubvunza vadzokororazve. Uye kana zvichizoita kunge (zvine nharo) zvemakateedzana. Asi George RR Martin anofarira kutamba zvinokanganisa neayo hongu, kwete kana pamwe. Uye enzanisa nebasa reiyo Directores yeakateedzana, anga aine maawa matanhatu yemwaka wekupedzisira iwoyo. Asi inotarisira kuzadza mapeji 3.000 mumabhuku ake maviri anotevera, uye tichaona kana asingazowedzerizve (ane mamwe maganhuro nezviono) kana achizvida.
Uyewo koka vaverengi kuenderera kuenzanisa kuti, semuenzaniso, vanga vari sei magumo akasiyana evamwe mavara mumabhuku uye mune akateedzana. Saka zvese zvichiri mumhepo uye yakazvipira mukufungidzira nekukakavara.
Pakupedzisira kanda mubvunzo kusimbisa enigma uye kuenderera mberi nekukurudzira gakava pakati pevaverengi vako nevataridzi. Kuguma "chaiko" kuchavei? Iyo yemumabhuku kana iyo iya yakateedzana? Zvakanaka, isu tichafanira kuramba takamirira, zvinoita kunge imwe nguva yechando kupfuura imwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Fantasy » George RR Martin anotaura nezvekuguma kwake kuMutambo weZigaro